LucidPress: Na-arụ Ọrụ Ntanetị Ntanetị & Nkọwapụta Dijitalụ | Martech Zone
Lucidpress beta bụ ngwa eji arụ ọrụ web, dọrọ-na-dobe ngwa maka ibipụta na mbipụta dijitalụ. Ngwa ahụ na-enye onye ọ bụla ohere ịmepụta ọdịnaya ọkachamara maka ibipụta ma ọ bụ weebụsaịtị, ma enwere ike iji ya na azụmaahịa ma ọ bụ gburugburu onwe gị.
Ebe ngwanrọ desktọọpụ dị n'azụ ihe ọhụrụ nke ahịa gbanwere, anyị na-ahụ ọdịnihu doro anya na ngwa ngwa weebụ. Site na Lucidpress, ebumnuche anyị bụ ime ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla iji mepụta ọdịnaya dị egwu dịka ihe eji emepụta ihe eji arụ ọrụ agbakwunyere na igwe ojii. - Karl Sun, CEO, Lucid Software
Ngwa ihe eji eme ihe ugbu a bu ihe siri ike na / ma obu oke onu (Adobe Illustrator, InDesign), ma obu ebughi nzube (Okwu, PPT). Lucidpress bụ ihe ngwọta ọzọ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji na, ebe ọ bụ na igwe ojii dị, nwekwara ngwa ọrụ njikọ arụpụtara ozugbo n'ime interface. Site na usoro mmụta mmụta efu, ọnụahịa nwere ike ịnweta, yana atụmatụ mmekọrịta, Lucidpress bụ ngwa ọrụ na-egbu egbu maka ụlọ ọrụ igwe ojii.
Lucidpress ndi otu n’awu wu ya Lucidchart, ngwa ntanetị weebụ a ma ama nke nyere ndị ọrụ 1M + aka, gụnyere ndị otu na AT & T, Warby Parker, Citrix, Ralph Lauren, na Groupon.
Tags: mbipụta dijitalụndukweUche Nwosuonye mmebe ntanetị
Na-abaghị uru: 3.0gwé ojii Na-enweta Ego XNUMX na Bloomerang
Wzọ asaa iji zipụ Email Na-aga nke Ọma